SimpleTexting: SMS နှင့်စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်း | Martech Zone
ကြိုဆိုပါတယ် စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို သင်ခွင့်ပြုချက်ပေးသောအမှတ်တံဆိပ်မှသင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အကျိုးအရှိဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအသုံးပြုနေသည်
အရောင်းမြှင့်တင်ရန် - ၀ င်ငွေတိုးရန်အထူးအစီအစဉ်များ၊ အထူးလျှော့စျေးများနှင့်အချိန်တိုတောင်းသောကမ်းလှမ်းချက်များကိုပေးပို့ပါ
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး Build - ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုကိုနှစ်လမ်းသွားစကားပြောဆိုမှုများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးပါ
ပရိသတ်ကိုပါ - အရေးကြီးသောအသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုလျင်မြန်စွာမျှဝေပါ
Generate စိတ်လှုပ်ရှားမှု - စာသားမှအနိုင်ရသည့်သိမ်းဆည်းမှုများသို့မဟုတ်စာဖြင့်မဲဖြင့်မဲပေးခြင်းများကိုစီစဉ်ပါ
ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များ A တွက်စာသားများ A တွက်စာရင်းသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်တည်းမေးခွန်းများပေးပို့ခြင်းကိုခွင့်ပြုပါ
ပျိုးထောင်ပါ - ဦး ဆောင်မှုနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲသူတို့ကိုရံဖန်ရံခါစာသားနှင့်အတူစေ့စပ်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့
ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ် (သို့) အခြားအသိပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းစစ်ဆေးလေ့မရှိသော်လည်းစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၏ 98% ဖွင့်လှစ်, link များပျမ်းမျှ CTR 17 လက်ခံရရှိလျက်, ပျမ်းမျှ SMS ကိုပြောင်းလဲနှုန်း 45 ခန့်ခန့်!
SimpleTexting SMS ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများ
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သူ ၃၉.၅% ကအီးမေးလ်စျေးကွက်သည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ထက်စာလျှင်ပွင့်လင်းမှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
SimpleTexting SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီရင်ခံစာ
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၏ဝေါဟာရနှင့်နည်းပညာကိုသင်မရင်းနှီးပါကကျွန်ုပ်တို့ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည် ဤနေရာတွင် SMS အဖြစ်ဝေါဟာရများ နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်။
SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အဓိကကျသည် အခွင့်။ အခြားလိုင်းများတွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်ဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) ထွက်ခြင်းအတွက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအချို့လိုအပ်သော်လည်းမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်သို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပြုချက် အဆိုပါစာရင်းသွင်းသူထံမှ။
စာရင်းသွင်းသူသည် signage (၇၁၈၁၃ MARKETING စာသား) မှတစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သည့် opt-in တောင်းဆိုမှုကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ ခလုတ်နှိပ်ခြင်း၊ ဝက်ဘ်ပုံစံများ၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (ကလစ်နှိပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်) သို့မဟုတ်ဝဘ်ပုံစံကိုနှိပ်ခြင်း၊ Facebook Lead Gen Ads၊ Text-to-Vote သို့မဟုတ် Text-to-Win ပြိုင်ပွဲများသို့မဟုတ် POS Checkout ပင်ဖြစ်သည်။
များစွာသောသယ်ဆောင်သူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သီးခြားသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်များလိုအပ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်လိုအပ်ချက်များလည်းရှိသည်။ SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ရခြင်း၏အဓိကကျသောအချက်မှာထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် platform လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။
SMS Marketing ဘယ်လိုထူးခြားသလဲ။
တိုတောင်းသော - SMS သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည် စာတိုစနစ်။ ဇာတ်ကောင် တစ်ခုတည်းအဘို့အကန့်သတ် သတင်းစကား ဇာတ်ကောင် ၁၆၀။ မျက်မှောက်ခေတ်ဖုန်းများနှင့်ကွန်ယက်အများစုသည်စုပေါင်းဆက်သွယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်၎င်းတို့သည်စာလုံးရေ ၁၆၀၀ အထိမက်ဆေ့ခ်ျများကိုအပိုင်းလိုက်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အခြားမက်ဆေ့ခ်ျပုံစံများနှင့်အတော်လေးကွဲပြားသည်။ MMS သည်ဓာတ်ပုံများ၊ animated gifs များနှင့်ဗီဒီယိုများကို (အရွယ်အစားအကန့်အသတ်နှင့်သာ) ပို့နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
အချိန်ကိုက် - စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုမိုဘိုင်းဖုန်းသို့တိုက်ရိုက်ပို့သည်ဟူသောအချက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်လက်၌သို့မဟုတ်အနီးအနားတွင်ရှိသည်။ အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏စာပို့ခြင်းမဟာဗျူဟာတွင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အသိပညာပေးမှုများကိုမောင်းနှင်ခဲ့ပါကမိုဘိုင်းဖုန်းသည် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အီးမေးလ်ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနာရီပေါင်းများစွာပင်ရက်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Location - စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်ကိရိယာ၏ပထဝီအနေအထားပေါ် မူတည်၍ မရသော်လည်းဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လက်လီဆိုင်တစ်ခုအတွက်လျှော့စျေးကိုတွန်းအားပေးခြင်းသည်အိမ် ၀ န်ဆောင်မှုခံသူတစ် ဦး သည်အလုပ်ခွင်မှထွက်ခွာနေသဖြင့်ချက်ချင်းအသွားအလာသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဒေသခံသို့မဟုတ်အခမဲ့ပေးသောနံပါတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံတိုတောင်းတဲ့ကုဒ်ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။
သင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းပလက်ဖောင်းကိုရှာနေလျှင် SimpleTexting သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ပေါင်းစပ်မှုများတွင် ဦး ဆောင်သည်။
SMS နှင့် MMS စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပို့ပါ - အဆက်အသွယ်အုပ်စုတစ်စုသို့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။ ဓာတ်ပုံများထည့်ပါ၊ သင့်စာများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ link များကိုမည်သူနှိပ်သည်ကိုခြေရာခံပါ။
နှစ်လမ်းသွားစကားစမြည်ပြောဆိုပါ - ဖောက်သည်များနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစာပို့ပါ။ နံပါတ်အသစ်တစ်ခုရယူပါသို့မဟုတ်သင့်လက်ရှိတည်ရှိနေသောစာသားကိုသုံးပါ။ (သင်၏အသံဝန်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲ)
စာရင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုတင်သွင်းပါ - ဖုန်းနံပါတ်များကိုလျှင်မြန်စွာစုဆောင်းရန်သင်၏လက်ရှိအဆက်အသွယ်များကိုထည့်ပြီး text-for-info ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုပါ။
ကုတ်တိုများ - သင်၏လုပ်ငန်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သီးသန့်စာလုံး ၆ လုံးပါသော SMS တိုတောင်းသောနံပါတ်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။ ၎င်းတို့သည်မှတ်မိရန်လွယ်ကူပြီးများသောအားဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
2- Way Messaging - ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ စကားစမြည်ပြောဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်နှစ်လမ်းသွားစာပို့ခြင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်ဆံရန်။ သင်၏လက်ရှိနံပါတ်ကိုသုံးပါသို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုရ!
စီစဉ်ထားသည့်စာသားများ - သင်၏စာသားအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုနာရီ၊ ရက်သို့မဟုတ်လများကိုကြိုတင်စီစဉ်ပြီးနောက်ထိုင်။ အနားယူပါ။ ကျန်တာတွေကိုလုပ်မှာပါ
autoresponder - ပရိသတ်များကိုရက်များ၊ ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လများအတွင်းအလိုအလျောက်အကွာအဝေးခွဲထားသောစာတန်းများဖြင့်စေ့စပ်ထားပါ။ ယိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖန်တီးခြင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။
သွင်းကုန်ဆက်သွယ်ရန် - စာရင်းရှိပြီးသားလား။ သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအလွယ်တကူတင်သွင်းပါ။ ကိုယ်ပိုင်မက်ဆေ့ခ်ျအတွက်အသုံးပြုရန်အီးမေးလ်၊ အမည်နှင့်မှတ်စုများစသည့်အပိုဆောင်းများထည့်ပါ။
Multi-Number - အကောင့်တစ်ခုထဲသို့ဖုန်းနံပါတ်ပေါင်းများစွာထည့်ပါ။ မှန်ကန်သောသတင်းစကားကိုမှန်ကန်သောဌာန၊ အေးဂျင့်သို့မဟုတ်တည်နေရာသို့သေချာစွာသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
SimpleTexting မိုဘိုင်း - သင်သွားနေလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုရယူသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS နှင့် Android app များသည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုနေရာတိုင်းမှစီမံခွင့်ပေးသည်။
SMS သော့ချက်စာလုံးများ - ဖုန်းနံပါတ်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူစာရင်းကိုပြုစုရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ SMS သော့ချက်စာလုံးတစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
တိုးချဲ့ထားသောစာတိုပေးပို့ရေး - ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားစာလုံးရေ ၁၆၀ သာရှိသောကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတင်းများကိုသင်ပို့ပို့နိူင်ရန်သင့်အားစာလုံးရေ ၃၀၄ လုံးပေးမည်။
MMS စျေးကွက် - MMS သည်သင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျလှုပ်ရှားမှုများကိုကူပွန်များ၊ ထုတ်ကုန်ပုံများနှင့်အခြားကြွယ်ဝသောမီဒီယာများဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သငျသညျလညျးစာသားဇာတ်ကောင် 1,600 အထိရ။
Image Attachments စာသားကအက္ခရာ ၁၆၀ ပဲလို့ဘယ်သူပြောတာလဲ။ စကားလုံး ၁၀၀၀ တန်ပုံတစ်ပုံ။ သင်၏စာသားများကိုလှပသောရုပ်ပုံများနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ကူပွန်များဖြင့်တိုးမြှင့်ပါ။
စိတ်ကြိုက် Fields - သင်၏အချက်အလက်များကိုစီမံပြီးကိုယ်ပိုင်စာသားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပလီကေးရှင်းတွင်ပုံမှန်နယ်ပယ်အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သော်လည်းသင်လိုအပ်သမျှကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဒေတာများစုစည်းမှု - သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါသလား။ သငျသညျပွုရပါမယ်အားလုံးမေးဖြစ်ပါတယ်။ နောင်လာမည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏အချက်အလက်များကို Custom Fields တွင်သိမ်းဆည်းပါမည်။
အပိုင်းများ - အပိုင်းများသည်သင်၏စာသားစျေးကွက်မဟာဗျူဟာတွင်ပရိသတ်ကိုပစ်မှတ်ထားရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုယနေ့စတင်ပါ။
Link ကိုခြေရာခံ - သင်၏တိုတောင်းသောအချိတ်အဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုဖြင့်မည်မျှမကြာခဏနှိပ်သည်ကိုကြည့်ပါ။ ရလဒ်များကိုခြေရာခံပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာသည်။
အသင်းဖော် - SimpleTexting ၏အသင်းဖော်များကသင့်အားသင်၏စာရင်းထဲသို့ထပ်ဆောင်းအသုံးပြုသူများကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပေးရုံသာမကအသုံးပြုသူအသစ်တိုင်းကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။
သတင်းစကားများ - SimpleTexting ၏ဝေး message feature သည်သင်၏ရုံးအပြင်ဘက်တွင်သို့မဟုတ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုအတွင်းရှိအဆက်အသွယ်များကိုတုန့်ပြန်သောအလိုအလျောက်သတင်းစကားတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
တင်းပလိတ်များနှင့်မိတ္တူပွားများ - သင်မကြာခဏပေးပို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၊ အဝင်စာပြန်ကြားချက်များ၊ Autoresponders နှင့်သော့ချက်စာလုံးအတည်ပြုသောစာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကုန်သက်သာသည်။
သေနတ်မောင်းခလုတ် - လျှပ်စီးမြန်သောဖောက်သည်များထံသို့ပြန်သွားပါ။ Triggers ဖြင့်သင်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ဘုံမေးမြန်းချက်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။
သင်၏ရလဒ်များကိုကြည့်ပါ - လှပသောဂရပ်များ၊ ဂရစ်များနှင့်ဇယားကွက်များဖြင့်သင်၏စာရင်းသွင်းသူများ၊ စာတိုများနှင့်သော့ချက်စာလုံးကြီးထွားမှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သငျသညျယုံဖို့ကမြင်ရပါတယ်။
Win ကိုစာပို့ပါ - ခေတ်သစ်လှည့်ကွက်တစ်ခုပါသောစံနမူနာပြစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ၊ SMS လှည်းလှော်ကိုဝင်ရန်လွယ်ကူပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာစာရင်းပေးသွင်းသူကိုထည့်သွင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။
မဲဆန္ဒစစ်တမ်းများသို့စာပို့ပါ - စာသားစစ်တမ်းဖြင့်ဖောက်သည်များထံမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်ရယူပါ။ ရွေးချယ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီရလဒ်များကိုသင်၏သင်တန်းသားများကိုမျှဝေပါ။
မဲဆန္ဒပေးသွင်းသူ - စစ်တမ်းများဖြင့်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်ရရှိရန်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သင့်မေးခွန်းကိုသာပို့ပြီးအဖြေများကိုစောင့်ဆိုင်းပါ။
အလွန်သေးငယ်သောလင့်များ - အဖိုးတန်ဇာတ်ကောင်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။ အရှည်ဆုံး URL များကိုပင်စာသားနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောအလွန်သေးငယ်သောလင့်ခ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းပါ။ ဆိုဒ်များ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ကူးယူနိုင်သောအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်အက်ပ်များသို့လင့်များပို့ပါ
စာသား - Enable သင့်နံပါတ် - သင်၏အသံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏လက်ရှိစီးပွားရေးဖုန်းနံပါတ်ပေါ်ရှိစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလက်ခံရရှိပါ။
အသိပေးချက်များ Push - Desktop push အသိပေးချက်များဖြင့်သင်သည်လွဲချော်နေသောမည်သည့်စာကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ SimpleTexting မှဝေးဝေးသွားနိုင်သည်။
Rollover ချေးငွေများ - 'em or lost' ကိုသုံးပါ။ မဟုတ်တော့ပါဘူး! အသုံးမပြုရသေးသောခရက်ဒစ်များသည်ယခုအခါလှိမ့်သွားသည်။ သင်သည်သင်၏ကျန်ရှိနေသေးသောခရက်ဒစ်များကိုနောက်လကုန်အထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ဖုန်းမှအုပ်စုလိုက်စာသား - သင်ကွန်ပျူတာသို့မရရှိနိုင်သည့်တိုင်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများထံသို့စာသားပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကိုပေးပို့ပါ။ သင်မက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုသောစာရင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစာပို့ရုံသာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောလူများထံပေးပို့ပါမည်။
Self- သန့်ရှင်းရေးစာရင်းများ - သင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့တိုင်းအချိန်ကုန်သွားသောနံပါတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကအလိုအလျောက်စစ်ဆေးပေးပြီးသူတို့မြင်တွေ့ရသည့်အခါဖယ်ရှားပေးသည်။ သငျသညျအစဉ်မပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့မလိုအပ်ပါ!
အလိုအလျှောက်မွေးနေ့စာသားများ - ကိတ်မုန့်နှင့် confetti ကိုထုတ်ပစ်ပါ။ ၎င်းသည်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်မွေးနေ့ဖြစ်သော SMS ကိုစတင်ရန်နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာပြီးသင်၏သုံးစွဲသူများကိုပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
SimpleTexting SMS ပေါင်းစည်းမှု
ဝက်ဘ်ပုံစံများ - သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှသင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုပရိသတ်များကခွင့်ပြုပါ အမြန်မိတ္တူနှင့်ငါးပိတစ်ခုသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသောပုံစံတစ်မျိုးကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
Mailchimp ပေါင်းစည်းမှု - Mailchimp အကောင့်ရှိပါသလား။ ၎င်းကို SimpleTexting ဖြင့်ထပ်တူပြုပြီးပလက်ဖောင်းနှစ်ခုအကြားအဆက်အသွယ်များကိုစတင်ဝေမျှပါ။ လက်စွဲပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန်များမရှိတော့ပါ။
API ကို - သင်၏လက်ရှိစနစ်ထဲသို့စာပို့နိုင်မှုစွမ်းရည်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်သော API မှတစ်ဆင့် SimpleTexting ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ အတူတူငါတို့လှပတဲ့ SMS-enabled ထုတ်ကုန်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။
Zapier ပေါင်းစည်းမှု - Zapier နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည် SimpleTexting ကို Gmail, Facebook နှင့်အခြားအပလီကေးရှင်းအပါအ ၀ င်အက်ပလီကေးရှင်း ၁၀၀၀ ကျော်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များဖန်တီးနိုင်သည်။
App များ - SimpleTexting ကိုသင်အသုံးပြုပြီးဖြစ်သော web app များနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ရောနှောဖို့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သင်၏စျေးကွက်ကိုနောက်အဆင့်သို့ယူပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ ရိုးရာ ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုအသုံးပြု။ တာပါ။
Tags: သော့ချက်စာလုံးတွေmailchimpMMS ကိုmms စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်း sms appစီစဉ်ထားကျမ်းသတင်းတိုစနစ်ကုဒ်တိုများချစ်သူစာတိုsms apisms Autoresponderssms ပြောင်းလဲမှုနှုန်းsms ctrsms သော့ချက်စာလုံးများsms စျေးကွက်ရှာဖွေရေးsms segmentSMS ပုံစံစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုမဲရုံစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့စာသားသတင်းပို့ခြင်း apiမဲပေးရန်စာသားအနိုင်ရစာသားzapier